The World of the Married (2020) - Myanmar Asian TV
The World of the Married ဆိုတဲ့အတိုင်း
အိမ်ထောင်သည်တွေရဲ့ ဘဝကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
BBCရုပ်သံလိုင်းကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Doctor Foster ဆိုတဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို remake လုပ်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပြီး JTBC ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်
အလုပ်မှာလည်း အောင်မြင်တယ် သားလေးတစ်ယောက်နဲ့ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်
သူ့ယောက်ျား လီထယ်အိုကတော့ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ Entertainment ကုမ္ပဏီလေးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်
ဂျီဆွန်းဝူးတစ်ယောက် သူ့ယောက်ျားရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကို သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့•••••••
VIP ဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြိုက်ပြီးအားပေးကြတဲ့ မေတ္တာဝိုင်းပို့ကြတဲ့သူတွေ ? ဒီဇာတ်လမ်းကိုလည်းကြည့်ပြီး မေတ္တာပို့နိုင်ကြပါပြီလို့
VIP လိုပဲ ရှော့ခ်ရစရာသံသယဝင်စရာဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ အပိုင်း ၁ ရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းနဲ့တင် ကိုယ်တော့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားတယ်
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ရှေ့၆ပိုင်းလောက်ကို rating 18+သတ်မှတ်ထားပါတယ်
The World of the Married ဆိုတဲ့အတိုင္း
အိမ္ေထာင္သည္ေတြရဲ႕ ဘဝကို႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ ဒရမ္မာဇာတ္ကားေကာင္းေလးတစ္ခုကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္
BBC႐ုပ္သံလိုင္းကထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ Doctor Foster ဆိုတဲ့႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲကို remake လုပ္ထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္ၿပီး JTBC ႐ုပ္သံလိုင္းက ထုတ္လႊင့္တာျဖစ္ပါတယ္
အလုပ္မွာလည္း ေအာင္ျမင္တယ္ သားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝေလးကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္
သူ႔ေယာက္်ား လီထယ္အိုကေတာ့ မိန္းမျဖစ္သူရဲ႕အေထာက္အပံ့နဲ႔ Entertainment ကုမၸဏီေလးတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ထားတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္
ဂ်ီဆြန္းဝူးတစ္ေယာက္ သူ႔ေယာက္်ားရဲ႕ေဖာက္ျပန္မႈကို သိလိုက္ရတဲ့အခါမွာေတာ့•••••••
VIP ဇာတ္လမ္းတြဲကိုႀကိဳက္ၿပီးအားေပးၾကတဲ့ ေမတၱာဝိုင္းပို႔ၾကတဲ့သူေတြ ? ဒီဇာတ္လမ္းကိုလည္းၾကည့္ၿပီး ေမတၱာပို႔ႏိုင္ၾကပါၿပီလို႔
VIP လိုပဲ ေရွာ့ခ္ရစရာသံသယဝင္စရာဇာတ္ဝင္ခန္းေတြနဲ႔ အပိုင္း ၁ ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအခန္းနဲ႔တင္ ကိုယ္ေတာ့ ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္သြားတယ္
ဒီဇာတ္လမ္းတြဲရဲ႕ ေရွ႕၆ပိုင္းေလာက္ကို rating 18+သတ္မွတ္ထားပါတယ္
Translators : HMN
Encoder : Min Theim Kyaw
File Size : 600 MB – 700 MB
DOWNLOAD FOR SOLID DRIVE
Episode 01Episode 02Episode 03Episode 04Episode 05Episode 06Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12
DOWNLOAD FOR MEGAUP
DOWNLOAD FOR USERS DRIVE
Episode 01Episode 13Episode 14Episode 15Episode 16 END
Genre: 18+, Family
Duration: 45 m min
Starring: Kim Hee-ae, Kim Young-min, Park Hae-joon, Park Sun-young,
Ex-Girlfriend Club ( 2015 )
Korean Comedy , Romance ျကိုက္သူေတြအတြက္ Ex Grilfriend’s Club တဲ့ကားေလးပါ … 2015မွာထြက္႐ွိထားၿပီး Song Ji Hyo နဲ႔ Byun Yoo Han တို႔က Main leaderေတြအျဖစ္ပါဝင္ထားပါတယ္ IMDb မွာလည္း 7.8/10ထိရထားၿပီးတကယ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ကားေလးပါ Ji Hyo ပရိတ္သတ္ေတြလည္းႀကိဳက္ၾကမွာပါ ?? ဇာတ္လမ္းေလးကေတာ့…
45 m min
#unicode No Secret (Chinese Drama) ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ Korea series တစ်ခုကိုအခြေံပီးရိုက်ကူးထားပါတယ် (ယူတို့ရဲ့အချစ်တော် Lee Jong Suk ရဲ့ I Can Hear Your Voice ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကိုအခြေခံထားတာပါနော်) Main role actor ကတော့ (Our Gamorous Tmes / Royal Nirvana/…
ဂျွန်စောလို့လူသိများတဲ့ မင်းသားကြီးSong Seung Heon ရဲ့ Political, Comedy Drama အသစ်လေးပါ … မြို့နယ်အမတ်ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်နေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်ဝီဒယ်ဟန် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ တစ်ပတ်အလိုမှာငယ်စဉ်ကတည်းကအမေနဲ့ကွာရှင်းသွားပြီး မိသားစုကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အဖေဖြစ်သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုကြောင့် တာဝန်မဲ့တဲ့သားဆိုပြီး ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနှုန်းကျဆင်းတာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲရှုံးသွားခဲ့ရတယ် … ဒီလိုနဲ့ ၃နှစ်ကြာသွားပြီး အငှားကားမောင်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရင်း နောက်အကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်ပြိုင်ဖို့အတွက် လူထုထောက်ခံချက်ပြန်လည်ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်ကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့တယ် … တစ်နေ့တော့…
kake (賭ケ) ကတော့ ​gamble (လောင်းကစား) gurui (グルイ) ကတော့ maniac (အရူး) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်… မြန်မာလို ပြန်ရမယ်ဆိုရင် လောင်းကစား ကို စွဲလမ်းတဲ့ အရူး တွေပေါ့… Manga နဲ့ Anime အပေါ် အခြေခံထားတဲ့ Live Action တစ်ခုပါ… Anime လည်း…
အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့ သိပ်မကြာခင်ကပဲ MBC ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိတဲ့ FAILing in Love ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ … မိနစ် ၃၀ စာ အပိုင်း ၁၀ ပိုင်းသာ ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေ သဘောကျစေမယ့် ကျောင်းနောက်ခံ Romance ဇာတ်ကားလေးပါ … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ – ကန်ဖာရန်း,…
Standing in the Time ( 2019 )
45 min. min
#unicode 2019 ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Chinese Romatic Drama လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်❤️ (ရိုလား မရိုးလားဆိုတာ Poster တွေသာ ကြည့်လိုက်ပေါ့ ?) အားလုံးရဲ့အချစ်တော် The Enternal Love ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကမင်းသားလေး Xing Zhao Lin ရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Standing In The Time ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးပါရှင့်?…
#Unicode MMATV ပိရိသတ်များအတွက် ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ်လေး တစ်ခု နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ?1999 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ “ငါးကလေး” လို့အမည်ရတဲ့ “The Lagendary Sibling” (သို့မဟုတ်) “Handsome Sibling” series လေးကိုကြည့်ဖူးကြမှာပါ။အရမ်းကောင်းတဲ့ series လေးတစ်ခုပေါ့။ ?အခုအဲ့ဒိ series လေးအတိုင်းကိုပဲ ဆန်းသစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်ခံစားကြည့်ရှုနိုင်မယ့် series အသစ်လေးဖြစ်တဲ့ “Handsome sibling”…
Genre: Action, Adventure, Comedy, Friendshhip, Historical, Mystery
Children of A Lesser God ( 2018 )
2018မွာထြက္႐ွိထားတ့ဲ သဘာဝလြန္ပံုစံေလးန႔ဲ့႐ိုက္ကူးထားတ့ဲ စံုေထာက္ seriesေလးပါ. နာမည္ႀကီးကားေတြကိုထုတ္လႊင့္ေနတ့ဲ OCN ႏွင့္ Netflixတို႔က Distributorလုပ္ထားေပးတာျဖစ္ၿပီးစုစုေပါင္း၁၆ပိုင္းပါဝင္ထားပါတယ္ Castsေတြကေတာ့ Kang Ji Hwan,Kim Ok Bin,Shim Hee Sub,Lee Elliya တို႔ကပါဝင္ထားၾကပါတယ္ Rating မွာဆိုရင္လည္း IMDb 7.6/10, My drama list8.3/10ထိရ႐ွိထားပါတယ္ Review****** ခြၽန္ေဂ်းအင္း(Kang Ji Hwan)ကစမတ္က်က်ေနတတ္ၿပီးအမႈစံုစမ္းရာမွာလည္း…